Tag: famakafakan'ny Affinity | Martech Zone
Tag: fanadihadiana momba ny firaisana
Fiaraha-miasa: Ampiasao ny tambajotranao hanakatonana fifanarahana bebe kokoa amin'ity sehatra fifampiraharahana momba ny fifandraisana sy Analytics ity
Ny vahaolana antonony eo amin'ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa (CRM) dia sehatra tsy mihetsika… tahiry iray misy ny fifandraisana, ny hetsika ataon'izy ireo, ary; angamba, fampifangaroana sasany amin'ireo rafitra hafa izay manome fahitana fanampiny na fanararaotana ara-barotra. Mandritra izany fotoana izany, ny fifandraisana rehetra ao amin'ny tahiry dia manana fifandraisana matanjaka sy manan-kery amin'ny mpanjifa hafa sy ny mpanapa-kevitra orinasa. Ity fanitarana ny tamba-jotra ity dia mbola tsy voadona. Inona no atao hoe Intelligence fifandraisana? Ny teknolojia fahitana fifandraisana dia mamakafaka ny angon-drakitra fifandraisan'ny ekipanao ary mamorona ho azy ny kisary fifandraisana takiana